Manohy ny fitokonany tsy hihinan-kanina ny mpikatroka Emirati Ahmed Mansoor nogadraina · Global Voices teny Malagasy
Tany am-ponja hatramin'ny taona 2017 noho ny fikatrohany an-tserasera i Mansoor
Voadika ny 17 Avrily 2019 5:39 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, Swahili, Italiano, English
Nisambotra azy tao an-tranony ny manampahefana amin'ny fiarovana tamin'ny 20 marsa 2017 noho ny fanehoan-kevitra navoakany an-tserasera. Meloka araka ny lalànan'ny heloka an-tserasera nivoaka tamin'ny 2012 izy tamin'ny mey 2018 noho ny “fanivaivana ny sata sy ny voninahitry ny Emirà Arabo Mitambatra (EAM)” sy ny “famoahana tatitra sy torohay hosoka tao amin'ny media sosialy ho fanimbana ny fifandraisan'i EAM amin'ny firenena manodidina.” Namoaka didy azy higadra folo taona an-tranomaizina ny fitsarana sady nampandoa onitra 1.000.000 Emirati Dirhams (US $270,000) azy.
Nanandra-teny amin'ny hisian'ny fanavaozana demaokratika sy ny fiarovana ny zon'olombelona ao amin'ny fireneny sy ny faritra misy azy efa mihoatra ny folo taona izao i Mansoor. Izy no nahazo ny lokan'ny Orina Mpanasoa Martin Ennals, tamin'ny taona 2015 izay manohana ireo mpiaro ny zon'olombelona ahiana ho idiran-doza. Mpikambana ao amin'ny Komity mpanolotsaina ao amin'ny Fanarahamaso ny zon'olombelona Afovoany Atsinanana sy Afrika Avaratra izy.
Tsy vao sambany i Mansoor no nampidirina am-ponja tahaka izao. Tamin'ny taona 2011, nampidirina am-ponja izy sy ny mpikatroka ara-politika efatra hafa noho ny fifandraisan-dry zareo amin'ny UAEHewar.net, tsenan-kevitra an-tserasera iray velomin'i Mansoor. Nampiasa ny tsenan-kevitra ihany koa izy hamoahana fanangonan-tsonia isian'ny fanitsiana demaokratika ao EAM. Nampiasa izany ny manampahefam-panjakana hiampangana an'i Mansoor ho manivaiva ny mpitarika ao amin'i EAM. Meloka izy ary nodidiana higadra telo taona, saingy navotsotra araka ny famindram-pon'ny filoha izy rehefa namita sazy fito volana monja.
Talohan'ny fisamborana azy tamin'ny taona 2017, nanao fanentanana an-tserasera tamin'ny anaran'ireo mpikatroka migadra ao EAM sy ao amin'ny toerana hafa rehetra ao anatin'ny faritra izy. Ny omalin'ny fisamborana azy, nisioka izy ny amin'ny fitohizan'ny fihazonana an-tondromolotra ilay Emirati mpikatroka Osama al-Najjar, izay mbola tavela any am-ponja na dia efa nahafeno ny telo taona nandidiana azy higadrany aza. Araka ny Human Rights Watch, nanasonia taratasy niarahana tamin'ireo mpikatroka hafa ao amin'ny faritra ihany koa izy miantso ny mpitarika ao amin'ny Ligy Arabo teo am-pivoriana tamin'ny marsa 2017 tao Jordania, ihany koa izy mba hamotsotra ireo gadra politika any amin'ny firenen'izy ireo tsirairay avy.
Araka ny Foiben'ny Zon'Olombelona ao amin'ny Hoala (GCHR), nanomboka nanao fitokonana i Mansoor ”hanoherany ny fepetra mahonena iainany ao am-ponja sy ny fitsarana tsy ara-drariny nahatra taminy”:
“Mivarotra ny fahasalamany i Ahmed Mansoor tamin'ny fiantsoana fifantohana amin'ny fanagadrana azy tsy ara-drariny tanteraka noho ny fanandrata-teny nataony hisian'ny fiaraha-monina mahazaka, liam-pandrosoana izay lazain'i EAM fa ao aminy,” hoy i Sarah Leah Whitson, tale ao Afovoany Atsinanana ao amin'ny Human Rights Watch. “Tokony hamoaka an'i Mansoor eo noho eo tsy misy fepetra ny manampahefana ao amin'ny EAM mba ahafahany manohy ny fanoloran-tenany ho feo isian'ny rariny ao amin'ny faritra izay mila izany fatratra,” hoy ny nampiany.
Nantsoin'ny International Campaign for Freedom in the UAE (Fanentanana Iraisampirenena ho amin'ny Fahafahana ao EAM) ny manampahefana hikarakara an'i Mansoor araka ny fenitry ny zon'olombelona iraisampirenena ary hamela ny vondrona iraisampirenena mpandala ny zo hitsidika azy ao am-ponja: